AKHRISO:-Sheeko La yaab Leh uu ii sheegay nin ka yimid Qaarada Yurub |
AKHRISO:-Sheeko La yaab Leh uu ii sheegay nin ka yimid Qaarada Yurub
Waxaan isku aragnay meel Shaqo,oo labadeenaba ay dan naga gashay,waxay aheyd goor barqo ah,salaan dabadeed ileen Soomali beynu nahaye waxaan iska xog wareysanay meesha la joogo iyo halkii aan ka nimid.
Aniga waxaan usheegay markii uu I weydiiyey Soomaaliya inan ka imid oo Xaaladu aheyd mid Dagaal iyo dhibaato Amni daro ay Waddankii ka jirto.
Isna waxa uu ii sheegay inuu dhawaan ka yimid Qaarada Yurub Dal ku yaalla waxaana uu iga waramay Xaalada Waddankii uu ka yimid iyo Sida ay Soomaalidu aheyd.
Ninkaasi dhalinyarada ah waxa uu ii sheegayin Soomaaliya 15 sano ka hor ugu dambeysay oo Sacuudiga ilaa Yurub Sanadahaasi ku noolaa.
2007-dii ayuu ii sheegay inuu ka tahriibay Sacuudiga islamarkaana Yurub uu iska dhiibay Waddanka Austria la yiraahdo,ogoow Austria waa dalka ay sii maraan dadka tahriibka ku gaara Waddanka Jarmalka.
Ninkaasi Soomaaliga ah ee Ugandha isku aragnay waxa uu igu yiri saaxiib dadku Yurub afka uun bey ka maqlaane wax yaalla ma jiraan,waxaan weydiiyey maxaa sidaa utiri oo hadeysan waxba oolin maxay dadku ugu dhamaadaan badda iyagoo Yurub uhanqal taagaya?
Waxa uu iigu war celiyey hadda aniga waxaan degganahay Waddanka Austria,Soomaalida ku nool waxay ku jiraan Bahdilaan iyo Nolol aad uliidata.
Waan la cajabay ninka warkiisa waxaana usheegay in muuqaal Qaxooti Soomaaliyeed oo Austria jooga ayaa waxa muuqaalkaasi ku arkay Soomaali qurux badan iyo qaabilaad fiican helay.
Dadkaasi waxa uu ku sheegay in lacago biil ah dibada looga soo diro hase ahaatee dadka waxa uu sheegay in Dawlada Austria ay siiso lacag dhan 200 Dollar 10 berry ayuu ii sheegay in lacagtaasi aysan kaafin qofka Soomaaliga.
Ku darso waxa uu igu yiri Saaxiib hadda Kampala hadaad ubaahato gees ka gees 2 kun Uganda Shillin ayaa boodha boodha uraaceysaa laakiin xaga maaha waa 10 dollar meel yar hadaad uraaceyso baska oo lacagtuna ay dhaqsi kaa baxeyso.
Qaarada Yurub ma sidaas baa mise waa Austria baahidaasi waxa laga soo sheegay?
W/D:Xasan Xayi Cabdullaahi